လောကဓံကို အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ခါးသီးပေမဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ - For her Myanmar
လောကဓံကို ဒူးထောက်ရရင်တောင် မထီတရီတော့ ပြန်မော့ကြည့်နိုင်ပါစေ..
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာတွေးမိလိုက်လဲ? သြော်.. သူများတွေများ ကံကောင်းလိုက်တာ.. ငယ်ငယ်လေးနဲ့.. မိဘတွေကလည်း အရတော်တယ်။ စသဖြင့်… လူတွေက အောင်မြင်ပြီးတဲ့ သူ့ဘဝရဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပဲ မြင်ကြပါတယ်။ ဒီအောင်မြင်မှုရလာဖို့ သူရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေကိုတော့ (သူကိုယ်တိုင် မပြတာလည်း ပါပါလိမ့်မယ်) မျက်စိယှန်းနေတတ်ကြပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လို ကျော်လွှားမှာလဲဆိုတဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး အခြေအနေတွေ ကွာခြားသွားကြရတာပါ။
ကျရှုံးမှုကို ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ သတ္တိရှိနေပါစေ။
တစ်ခါတည်းနဲ့ အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ကြိုးစားပြီးမှသာ အောင်မြင်လာကြတာပါ။ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ လမ်းကလည်း ဆူးခင်းတဲ့ ခရောင်းလမ်းတွေချည်းပါပဲ။ တစ်ခါ ကျရှုံးတဲ့အခါမှာ ဆက်ပြီး မကြိုးစားချင်တော့ဘူးလို့ လက်လျှော့လိုက်ရင် ဘဝဟာ အဲဒီမှာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ အရှုံးကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ ကြိုးစားပါ။ တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ အကြိမ်ပေါင်း ရာ၊ထောင်မက ကျရှုံးရင်လည်း ကျရှုံးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါ လဲကျတိုင်း တစ်ခါ ပန်းတိုင်နဲ့ ပိုနီးလာတာပါပဲ။ ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို သည်းခံခြင်းနဲ့ အားဖြည့်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ့ ချီတက်ပါ။
Related Article >>> လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို မွေးမြူပါ။
လူတိုင်းက တစ်ရက်ကို ၂၄ နာရီပဲ ရကြတာပါ။ ဒီအချိန်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လိုက်ပြီး ဘဝချင်းကလည်း ခြားနားသွားကြတာပါပဲ။ အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်နေတာတွေ၊ တစ်နေကုန်လုံး အားချိန်မရှိ ကြိုးစားနေတာတွေက အလုပ်ပြီးမြောက်တာနဲ့ ထပ်တူမကျပါဘူး။ အချိန်တွေအများကြီး အကုန်ခံ၊ တစ်နေကုန်လုံး အလုပ်ရှုပ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်မထွက်လာဘူးဆိုရင် အလကားပါပဲ။ နောက်ဆုံးရလာတဲ့ ရလဒ်ကသာ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးဖြတ်မယ့် အဆုံးအဖြတ်ပါ။ ရလဒ်မရမချင်း ကိုယ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ကို ဆွဲချမယ့်သူတွေကို မေ့ပစ်ပါ။
လူဆိုတာ အမျိုးမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းက ကိုယ့်ကို ကောင်းတဲ့နေရာကို ခေါ်ဆောင်ပေးသွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်အားကျရမယ့်သူတွေ၊ သင်ပြပေးမယ့်သူတွေ၊ လမ်းညွှန်မယ့်သူတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လည်း ကြိုးစားဖြစ်လာမှာ ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ ကိုယ်တိုင် မြင်လာအောင် လုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ အမြဲတမ်း သောကပေးနိုင်တဲ့သူတွေ၊ ဖိအားတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဆိုးရွားအောင် လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ မေ့ပစ်ချိန်တန်ပါပြီ။ သူတို့တွေက ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ ဒီလိုလူတွေနဲ့ အချိန်ကုန်မယ့်အစား ကိုယ့်အတွက် တန်ဖိုးရှိမယ့် အရာတစ်ခုခုကိုသာ ရှာဖွေပါ။
ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူပါ။
အခွင့်အရေးတိုင်းကို လက်လွှတ်မခံပါနဲ့။ ကံကောင်းခြင်းဆိုတာ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပါ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး မားမားမတ်မတ်ရပ်တဲ့သူတွေကို လောကဓံက မျက်နှာသာပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ ရာဖြတ်ကြည့်လို့ မရပါဘူး။ ထပ်ပြောပါမယ်။ ကိုယ့်ဘဝ၊ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူတာပါ။ ဖန်တီးယူရမှာပါ။ တကယ်လို့များ မလူးသာမလွန့်သာ အခြေအနေကို ရောက်နေတယ်ဆိုဦးတော့… Risk ယူရဲတဲ့ သတ္တိရှိနေရင် ဒီအခြေအနေက လွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ လှေကားတစ်ခုရဲ့ အောက်ခြေကို ရောက်နေတာက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ လှေကားထစ်တွေရဲ့ အပေါ်ဆုံးကို ရောက်နေတာထက်တော့ သာလွန်ပါသေးတယ်။
အကြောက်တရားကို တွန်းလှန်ပါ။ အများအမြင်တွေနဲ့ ကိုယ့်ဘဝလမ်းကို ပိတ်ဆို့မခံပါနဲ့။ အိပ်မက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ထုဆစ်ပါ။ လောကဓံကို ဒူးထောက်လျက်သား အရှုံးပေးရတယ် ဆိုဦးတော့.. ဘာမထီမျက်ဝန်းတွေနဲ့ ပြန်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် အိပ်မက်နဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ လက်တစ်ကမ်းမှာပါ။
လောကဓံကို ဒူးထောကျရရငျတောငျ မထီတရီတော့ ပွနျမော့ကွညျ့နိုငျပါစေ..
ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အောငျမွငျတဲ့သူ တဈယောကျကို ကွညျ့လိုကျပါ။ ဘာတှေးမိလိုကျလဲ? သွျော.. သူမြားတှမြေား ကံကောငျးလိုကျတာ.. ငယျငယျလေးနဲ့.. မိဘတှကေလညျး အရတျောတယျ။ စသဖွငျ့… လူတှကေ အောငျမွငျပွီးတဲ့ သူ့ဘဝရဲ့ ပစ်စုပ်ပနျကိုပဲ မွငျကွပါတယျ။ ဒီအောငျမွငျမှုရလာဖို့ သူရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ ကရြှုံးမှုတှကေိုတော့ (သူကိုယျတိုငျ မပွတာလညျး ပါပါလိမျ့မယျ) မကျြစိယှနျးနတေတျကွပါတယျ။ လူတိုငျးဟာ တူညီတဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရှိပါတယျ။ ကိုယျရငျဆိုငျရတဲ့ အခကျအခဲတှကေို ဘယျလို ကြျောလှားမှာလဲဆိုတဲ့ပျေါ မူတညျပွီး အခွအေနတှေေ ကှာခွားသှားကွရတာပါ။
ကရြှုံးမှုကို ရငျဆိုငျနိုငျတဲ့ သတ်တိရှိနပေါစေ။
တဈခါတညျးနဲ့ အောငျမွငျတယျဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အကွိမျကွိမျအခါခါ ကွိုးစားပွီးမှသာ အောငျမွငျလာကွတာပါ။ ပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့ လမျးကလညျး ဆူးခငျးတဲ့ ခရောငျးလမျးတှခေညျြးပါပဲ။ တဈခါ ကရြှုံးတဲ့အခါမှာ ဆကျပွီး မကွိုးစားခငျြတော့ဘူးလို့ လကျလြှော့လိုကျရငျ ဘဝဟာ အဲဒီမှာ ပွီးဆုံးသှားပါပွီ။ အရှုံးကို ခံနိုငျရညျရှိဖို့ ကွိုးစားပါ။ တဈကွိမျ၊ နှဈကွိမျ၊ အကွိမျပေါငျး ရာ၊ထောငျမက ကရြှုံးရငျလညျး ကရြှုံးပါလိမျ့မယျ။ တဈခါ လဲကတြိုငျး တဈခါ ပနျးတိုငျနဲ့ ပိုနီးလာတာပါပဲ။ ယုံကွညျမှုတဈခုကို သညျးခံခွငျးနဲ့ အားဖွညျ့ပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ ကွိုးစားမှုနဲ့ ခြီတကျပါ။
Related Article >>> လုပျငနျးခှငျမှာ အောငျမွငျဖို့အတှကျ စှနျ့ဦးတီထှငျလုပျငနျးရှငျတဈယောကျရဲ့ စိတျနသေဘောထားကို မှေးမွူပါ။
လူတိုငျးက တဈရကျကို ၂၄ နာရီပဲ ရကွတာပါ။ ဒီအခြိနျတှကေို ဘယျလိုအသုံးခတြယျဆိုတဲ့ပျေါလိုကျပွီး ဘဝခငျြးကလညျး ခွားနားသှားကွတာပါပဲ။ အလုပျတှေ အမြားကွီးလုပျနတောတှေ၊ တဈနကေုနျလုံး အားခြိနျမရှိ ကွိုးစားနတောတှကေ အလုပျပွီးမွောကျတာနဲ့ ထပျတူမကပြါဘူး။ အခြိနျတှအေမြားကွီး အကုနျခံ၊ တဈနကေုနျလုံး အလုပျရှုပျပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ ရလဒျမထှကျလာဘူးဆိုရငျ အလကားပါပဲ။ နောကျဆုံးရလာတဲ့ ရလဒျကသာ ကိုယျ့ကို တနျဖိုးဖွတျမယျ့ အဆုံးအဖွတျပါ။ ရလဒျမရမခငျြး ကိုယျလုပျခဲ့ရတဲ့ ကွိုးစားမှုတှကေို ထညျ့သှငျးစဉျးစားနမှော မဟုတျပါဘူး။
ကိုယျ့ကို ဆှဲခမြယျ့သူတှကေို မပေ့ဈပါ။
လူဆိုတာ အမြိုးမြိုး ရှိတတျကွပါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြ၊ အသိုငျးအဝိုငျးကောငျးက ကိုယျ့ကို ကောငျးတဲ့နရောကို ချေါဆောငျပေးသှားတတျပါတယျ။ ကိုယျ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ကိုယျအားကရြမယျ့သူတှေ၊ သငျပွပေးမယျ့သူတှေ၊ လမျးညှနျမယျ့သူတှရှေိနမေယျဆိုရငျ ကိုယျလညျး ကွိုးစားဖွဈလာမှာ ကြိနျးသပေါပဲ။ ဒီလိုမှ မဟုတျဘဲ ကိုယျ့ကို တနျဖိုးမရှိဘူးလို့ ကိုယျတိုငျ မွငျလာအောငျ လုပျနတေဲ့သူတှေ၊ အမွဲတမျး သောကပေးနိုငျတဲ့သူတှေ၊ ဖိအားတှနေဲ့ စိတျဖိစီးမှုတှကေို ဆိုးရှားအောငျ လုပျနတေဲ့သူတှဆေိုရငျတော့ မပေ့ဈခြိနျတနျပါပွီ။ သူတို့တှကေ ကိုယျ့ရဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ အခြိနျတှနေဲ့ ထိုကျတနျတဲ့သူတှေ မဟုတျကွပါဘူး။ ဘဝဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ ဒီလိုလူတှနေဲ့ အခြိနျကုနျမယျ့အစား ကိုယျ့အတှကျ တနျဖိုးရှိမယျ့ အရာတဈခုခုကိုသာ ရှာဖှပေါ။
Related Article >>> အရှုံးတှကေို အနိုငျမပေးမိပါစနေဲ့
ကိုယျ့ကံကွမ်မာကို ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးယူပါ။
အခှငျ့အရေးတိုငျးကို လကျလှတျမခံပါနဲ့။ ကံကောငျးခွငျးဆိုတာ နောကျတဈကွိမျ ပွနျလာဖို့ ခဲယဉျးပါတယျ။ ကံကွမ်မာကို ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးပါ။ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးပွီး မားမားမတျမတျရပျတဲ့သူတှကေို လောကဓံက မကျြနှာသာပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဘယျသူမှ ကိုယျ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ဝငျရောကျစှကျဖကျပိုငျခှငျ့မရှိပါဘူး။ ကိုယျ့တနျဖိုးကိုလညျး ကိုယျကိုယျတိုငျကလှဲပွီး ဘယျသူမှ ရာဖွတျကွညျ့လို့ မရပါဘူး။ ထပျပွောပါမယျ။ ကိုယျ့ဘဝ၊ ကိုယျ့ကံကွမ်မာကို ကိုယျတိုငျ ဖနျတီးယူတာပါ။ ဖနျတီးယူရမှာပါ။ တကယျလို့မြား မလူးသာမလှနျ့သာ အခွအေနကေို ရောကျနတေယျဆိုဦးတော့… Risk ယူရဲတဲ့ သတ်တိရှိနရေငျ ဒီအခွအေနကေ လှတျမွောကျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျတကျခငျြတဲ့ လှကေားတဈခုရဲ့ အောကျခွကေို ရောကျနတောက ကိုယျနဲ့ မဆိုငျတဲ့ လှကေားထဈတှရေဲ့ အပျေါဆုံးကို ရောကျနတောထကျတော့ သာလှနျပါသေးတယျ။
အကွောကျတရားကို တှနျးလှနျပါ။ အမြားအမွငျတှနေဲ့ ကိုယျ့ဘဝလမျးကို ပိတျဆို့မခံပါနဲ့။ အိပျမကျတှကေို ကိုယျတိုငျ ပုံဖျောထုဆဈပါ။ လောကဓံကို ဒူးထောကျလကျြသား အရှုံးပေးရတယျ ဆိုဦးတော့.. ဘာမထီမကျြဝနျးတှနေဲ့ ပွနျကွညျ့နိုငျမယျဆိုရငျ အိပျမကျနဲ့ ပနျးတိုငျဟာ လကျတဈကမျးမှာပါ။
Tags: #overcome, Create, Fundamental, her club, life, Motivation, success